Ciidamada Dowlada Oo Fashiliyey Weerar Alshabaab soo Abaabuley – Radio Baidoa
Ciidamada Dowlada Oo Fashiliyey Weerar Alshabaab soo Abaabuley
ska horimaad laga dareeemay gebi ahaanba Degmada Beled Xaawo ayaa saqdii dhexe ee xalay ka dhacay Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo ka dib markii la weeraray mid ka mid ah fariisimaha Ciidamada Dowladda halkaasi ku leeyihiin.
Maleeshiyaad la rumeysan yahay in Ururka Al Shabaab ay ka tirsan yihiin ayaa la soo sheegaya in ay gudaha u soo galeen Degmada Beled Xaawo, kadibna ay bartilmaameedsadeen Xerada UK, oo ay degan yihiin Ciidamada Dowladda.
Iska horimaadkan ayaa ku bilowday gantaalaha garbaha laga tuuro oo lagu weerarey xeradaasi, waxaana xigay iska horimaad dhex maray Ciidamada Dowladda iyo maleeshiyadii weerarka soo qaaday.
Iska horimaadkan ayaa waxaa uu yimid, xilli inta badan dadka reer Beled Xaawo ay hurdeen, iyadoona ay hurdada kaga soo tooseen daryanka hubkii cuslaa, ee iska horimaadkaasi uu ku bilowday.
Mid ka mid ah dhalinta ku nool Degmada Beled Xaawo oo ka waramay iska horimaadkan ayaa yiri “Meesha la weeraray waa Xerada UK oo ku dhex taala Degmada Beled Xaawo, waxaana degan Ciidamadii Dowladda ee la wareegay degmada. Saqdii dhexe ee caawa ayadoo dadka oo dhan hurdaan ayay markeliya magaalada xabad is qabsatay. Wax u eg qaraxyo ayaa dhacay, laakiin waxay ahaayeen sabano/baasuukayaal.”
Ciidamada Dowladda ee sida gaarka ah u tababaran ayaa waxaa ay iska caabiyeen maleeshiyadii Al Shabaab ee weerarka soo qaaday, kuna celiyeen halkii ay iska soo abaabuleen.
“Ciidamada Dowladda si fiican ayay isaga caabiyeen qoladii soo weerartay, oo loo maleynayo inay Shabaab ka tirsan yihiin, dib ayaana magaalada looga saaray.” Ayuu yiri Ruux kamid ah shacabka degmada Beled Xaawo oo la hadley Radio baidoa,
Waxaa aad u adag in macluumaad sax ah laga helo khasaaraha ka dhashay iska horimaadkan, xilliga oo habeen aheyd iyo cid weli ka hadashay, oo aynaan jirin.
Waa weerarkii ugu horeeyay oo ceynkiisa ah ay Shabaabku ku qaadaan mid ka mid ah xeryaha ciidamadu ku leeyihiin Degmada Beled Xaawo, tan iyo markii ay Ciidamada Dowladda la wareegeen gacan ku haynta degmadaasi, 4-tii bishan.
Madaxweyne ku xigeenka Dowlad Goboleedka Galmudug Oo Qaabiley Guddoonka golaha wakiilada Galmudug[SAWIRO]
Askari qof rayid ah u diley Nus Doolar